Dowladda Dalka Sweden ayaa shaaca ka qaaday in ay ka qeyb qaadanayso ololaha looga hortagayo kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida, – Balcad.com Teyteyleey
Dowladda Dalka Sweden ayaa shaaca ka qaaday in ay ka qeyb qaadanayso ololaha looga hortagayo kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida,
By Anwar Daacad	 Last updated Sep 7, 2017
Dowladda Dalka Sweden ayaa shaaca ka qaaday in ay ka qeyb qaadanayso ololaha looga hortagayo kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida, kuwaasi oo xilliyada qaar weerara Maraakiibta isticmaalaysa Biyaha Soomaaliya.
Ciidamada ka socda dowladda Sweden ayaa ku biiri doono kuwa ku sugan Biyaha Soomaaliya ee ka soo horjeedo kooxaha Burcadbadeeda.
Ciidamada Swedishka ee qorshuhu uu yahay in la keeno Biyaha Soomaaliya ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa ilaa 34 Askari, waxa ayna qeyb ka noqonayaan howlgalka Atlaanta oo Sanadihii danbe dhimay weerarada lagu qaado Markaabiita ku socdaasha Biyaha Soomaaliya.
“Tiro yar oo ka mid ah ciidankeena Badda oo wata Markab dagaal ayaa u baqooli doono Biyaha Soomaaliya, si ay qeyb uga noqdaan dadaalada ku aadan soo afjaridda Burcadbadeeda” ayaa lagu yiri Qoraal ka soo baxay dowladda Sweden.
Sidookale ciidamada ayaa soo galbi doono kaalmo gargaar ah oo ay hay’adda WFP u soo wado gudaha Dalka Soomaaliya, waxa ayna ka hortagi doonaan in ay kooxha Burcadadeeda afduubtaan.
Midowga yurub oo ay qeyb ka tahay dowladda Sweden ayaa waxa ay horay u sheegeen in loo baahan yahay in laga hortago weerarada Burcadbadeeda.
War qoraal ah oo horay uga soo baxay Midowga Yurub ayaa waxaa lagu sheegay in Biyaha Soomaaliya ay ka dhaceen 700 oo weerar oo ay geysteen kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida, iyadoo ay u suurta gashay in ay afduubtaan 30 Markab, oo qeyb ka ahaa Maraakiibta isticmaalayay Biyaha Soomaaliya.
The post Dowladda Dalka Sweden ayaa shaaca ka qaaday in ay ka qeyb qaadanayso ololaha looga hortagayo kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida, appeared first on Ilwareed Online.
Qarax lala eegtay Mid ka mid ah Shirkadaha Isgaarsiinta Puntland ka howlgalla
Madaxweynihii Hirshabelle oo soo saaray wareegto Hiiraan loogu qeybiyay laba gobol (Akhriso)